Posted by yawcommunity at Sunday, January 01, 20122comments Links to this post
မဟိန္တလေကနေ ညနေ လေးနာရီကျော်လောက် ထွက်ခဲ့ကြတယ်၊ ဆိဂီရိယနဲ့ မဟိန္တလေက လေးဆယ့်ငါးမိနစ်လောက် ကားမောင်းသွားရတယ်၊ ဆိဂီရိယတောင်ကို မြင်တော့ တက်နိုင်ပါ့မလား ဆိုတဲ့ သံသယက ၀င်လာခဲ့တယ်၊ ဆိဂီရိယတောင်ခြေကို မကြာခဏရောက်ဖူးတယ်၊ တောင်ကိုမြင်ပြီး မတက်နိုင်မှာ စိုးလို့ တခါမှ မတက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး၊
စိတ်ဝင်စားစာ ကောင်းမှန်းလဲ သိပါရဲ့။. မိမိတို့တက္ကသိုလ် Lecture တွေမှာ ဆိဂီရိယတောင်က ကမ္ဘာကျော် Painting တွေအကြောင်း သင်ယူရတယ်. သီရိလင်္ကာရောက်ဖူးသူတချို့ကတော့ ဆိဂီရိယတောင်ရဲ့ လွမ်းမောဖွယ်တွေကို ပြန်ရေးကြတယ်. သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေမှာလဲ ဆိဂီရိယတောင်အကြောင်း မှတ်တမ်းတင်တာကို ဖတ်ခဲ့ဖူးတယ်။
အရင်တုန်းက ဒီနေရာကို မြတ်စွာဘုရားရှင် ကြွရောက်ဖူးတယ်၊ ယခင်က ဒီနေရာကို ရဟန္တာအရှင်မြတ်(၇)ပါး ကြွရောက်ပြီး တရားရေအေး တိုက်ကျွေးခဲ့ဖူးတယ်၊ အရင်က အသောကမင်းကြီးရဲ့ သမီးတော် သင်္ဃမိတ္တာ ရဟန္တာထေရီမ ဘုရားပွင့်တဲ့ဗောဓိပင် တောင်ဖက်ကိုင်းကို သယ်ဆောင်လာခဲ့ဖူးတယ်။ တချိန်က ဒီနေရာဟာ မြေမြတ်မဟာ အဖြစ်ရှိခဲ့တယ်၊ ယခုအဲဒီနေရာမှာ သမိုင်းဝင် အထောက်အထား အဆောက်အဦးတွေကို တွေ့မြင်နိုင်တယ်၊
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း သုံးဆယ်ကျော်တုန်းက ဒီနေရာကို လူတိုင်းသွားလို့ မရခဲ့ဘူး၊ သူတို့တတွေ နယ်မြေခွဲထွက်ရေးအတွက် လက်နက်ကိုင် တိုက်ခိုက်နေခဲ့တယ်။ အခု ဒီနေရာလေးဟာ အစိုးရရဲ့ လက်အောက်ကို ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီး နယ်မြေထူထောင်ရေးတွေ စတင်လုပ်ဆောင်နေတာ တွေ့ခဲ့ရတယ်၊
Posted by yawcommunity at Friday, February 26, 20100comments Links to this post
သီရိလင်္ကာကို ပြန်ရောက်ပြီး ဘယ်မှမရောက်ဖြစ်ဘူး၊ ဒီနေ့တော့ နာရီဝက်သာသာ ကားမောင်းရတဲ့ ကနိစေရကျောင်းကို ဒါနေးသွားရတယ်၊ သီရိလင်္ကာယဉ်ကျေးမှုအရ ဆွမ်းစားကို ဒါနေးလို့ခေါ်တာပါ၊
တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်တာမို့ ကျောင်းထဲမှာ လူတွေစည်ကားနေတယ်၊ အထူးသဖြင့် တကျောင်းလုံး ကလေးငယ်တွေ အပြည့်ပါပဲ၊ သစ်ပင်အောက်မှာ ဇရပ်တွေပေါ်မှာ ခန်းမဆောင်တွေထဲမှာ ကလေးငယ်တွေကို တွေ့ရတယ်၊ ကလေးငယ်တွေကို ချစ်တတ်သူပီပီ သူတို့နဲ့ စကားပြောပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တယ်၊
သူတို့လေးတွေရဲ့ အသိစိတ်မှာ စနေ တနင်္ဂနွေနေ့ရောက်ရင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေကိုသွားရမယ်ဆိုတဲ့ အသိလေးတွေ ကိုယ်စီရှိနေကြတယ်၊ ကျောင်းရောက်ရင် ဗုဒ္ဓ၀င် ဇာတ်နိပါတ် ယဉ်ကျေးမှုစတာတွေ သင်ယူရတာကိုလဲ ပျော်နေပုံရတယ်၊သူတို့မျက်နှာကတွေကြည့်ရတာ စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတယ်၊ပြုံးလို့ ရွှင်လို့ တက်ကြွလို့။
တကယ့်ကို အတုယူလောက်တဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေကို အမွေပေးပုံပါပဲ၊ သီရိလင်္ကာတစ်နိုင်ငံလုံး အရွယ်ရောက်တဲ့ကလေးမှန်ရင် ဘုန်းတော်ကြီးမှာ ဘုရားစာ သင်ယူကြရတဲ့ အလေ့အထက အရှိန်တော်တော်ရနေပါပြီ၊ ဘာတွေသင်ပေးနေတာလဲ မေးကြည့်တော့ ဒီဃာဝါယေ၀ မဟန္တာ စတဲ့ မေတ္တာသုတ်အကြောင်း သင်နေတာပါတဲ့..ဘာတွေသင်ခဲ့ပြီးပြီလဲလို့ မေးကြည့်တော့ ဗုဒ္ဓ၀င် ဇာတ်နိပါတ်နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာသမိုင်းတွေသင်ခဲ့ပြီးပါပြီတဲ့၊
အမိမြန်မာပြည်မှာတော့ စာသင် စာချတဲ့ ကိုရင် ဦးဇင်းတွေတောင် ဗုဒ္ဓ၀င်ဆိုတာကို သီးသန့် မသင်ယူခဲ့ရပါဘူး၊ ကိုယ်သိချင်လို့ ကိုယ်တိုင်ပြန်လေ့လာရတဲ့ အနေအထားမှာ ရှိပါတယ်။ အတန်းခွဲတွေအများကြီးမှာ ဆရာ ဆရာမတွေက စေတနာဝန်ထမ်းလုပ်ပြီး သင်ပေးနေကြတာပါ၊ အမျိုး ဘာသာ သာသနာကိုချစ်တယ်လို့ ပါးစပ်ကပဲ အော်နေမယ့်အစား လက်တွေ့ကျတဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေ စနစ်တကျရေးဆွဲထားတဲ့ ဘာသာရေးအမွေပေးမှုတွေ လုပ်သင့်နေပြီဆိုတဲ့ စိတ်ကူးတွေလဲ တဖွားဖွား ပေါ်နေမိတယ်၊
ရွှေပြည်ကြီးမှာလဲ ကလေးငယ်များအတွက် ဓမ္မစကူးလ်သင်တန်းကျောင်းတွေ ရပ်ကွက်တိုင်း မြို့နယ်တိုင်း ဖွင့်ပေးရမယ်၊ ဓမ္မစကူးလ်ကျောင်းတွေ အတွက် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေကို ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းက စနစ်တကျရေးဆွဲရမယ်၊ ဓမ္မာစရိယ အကြီးတန်းအောင်လက်မှတ်ရထားတဲ့ သံဃာတွေ လမ်းမပျောက်ဖို့အတွက် ဓမ္မစကူးလ်ကျောင်းတွေမှာ ဆရာအဖြစ်ခန့်ထားရမယ်၊
ငါးနှစ်ကနေ ဆယ့်ခြောက်နှစ်အထိ ကလေးငယ်တွေအတွက် သီးသန့်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေလုပ်ရမယ်၊ ဆယ့်ခြောက်နှစ်ကနေ အသက်လေးဆယ်အရွယ် လူကြီးတွေအတွက် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတစ်ခု လုပ်ပေးမယ်၊ လေးဆယ်ကနေ လေးဆယ်ကျော် လူကြီးတွေကို ဆရာအဖြစ်ပြန်ခန့်အပ်ပြီး သူတို့တတွေအတွက် အဆင့်မြင့် ဗုဒ္ဓစာပေတွေသင်ပေးမယ်၊
သံဃာတော်များအတွက် တောင်တန်းသာသနာပြုစင်တာတွေ ပြည်ပသာသနာပြုစင်တာတွေဖွင့်ပေးရမယ်၊ပရဟိတလုပ်ချင်တဲ့ သံဃာတော်များအတွက် management သင်တန်းတွေပေးမယ်၊ Public Relationship လုပ်တဲ့အခါမှာ ပြောတတ် ဟောတတ်အောင် စနစ်တကျသင်ပေးတဲ့ သင်တန်းကျောင်းတွေလဲ ထပ်ဖွင့်ပေးရအုံးမယ်၊
နိုင်ငံတကာကို ရင်ဘောင်တန်းနိုင်တဲ့ Sangha University တွေကို ထပ်ဖွင့်မယ်၊ သာသနာနောက်ပိုင်းမှာ သေချာပေါက်ပေါ်လာမယ့် သာသနာဖျက်များကို ကာကွယ်ဖို့ ဓမ္မ၀ါဒီ သံဃာအဖွဲ့အစည်းကို စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားမယ်၊(သူငယ်ချင်းတစ်ပါးပြောတာလေးကို သတိရမိတယ်။ ကိုယ့်လူရေ နောက်ပိုင်းမှာ စတန့်ထွင် ဓမ္မကထိကတွေက အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တကို ပြောင်းပြန်လုပ်ပြီး နိစ္စ သုခ အတ္တလို့ ဟောလာကြအုံးမယ်တဲ့. သတိပြုစရာ ကောင်းလေစွ)
အဲလိုအဖွဲ့အစည်းတွေကို ထောက်ပံ့ပေးမယ့် သာသနာချစ်တဲ့ ဒကာ ဒကာမတွေကိုလဲ ထပ်ဖွဲ့စည်းရမယ်၊ သာသနာအရေးဆောင်ရွက်တဲ့အခါ ငွေကလဲ ရှိအုံးမှ ကိုး၊ ငွေရှိမှ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆောင်ရွက်နိုင်တာကလား၊ ဟုတ်တယ်လေ ကျန်းမာပါစေ ချမ်းသာပါစေလို့ ပါးစပ်မေတ္တာပဲ ပို့နေလို့မှ မလုံလောက်တာ၊လက်တွေ့ကျကျ အကူအညီပေးရင်း ဒုက္ခရောက်သူတွေကို ကယ်တင်ရမယ်၊
နောက်ထပ် ထူးထူးခြားခြား သင်တန်းလေးတစ်ခု လုပ်ချင်သေးတယ်၊ မုဒိတာပွားပုံသင်တန်းပါ၊ အောင်အောင်မြင်မြင် ကြိုးစားဆောင်ရွက်သူတွေကို မနှောင့်ယှက်ဘဲ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ သာဓုခေါ်တတ်အောင် မုဒိတာသင်တန်းတွေလဲပေးရမယ်၊ အရှင်မောဂ္ဂလာန်မထေရ်မြတ်လို မဟုတ်တာလုပ်တဲ့သူတွေကို ဆွဲထုတ်ရဲတဲ့ ရဲရင့်တဲ့ သံဃာတွေကို ၀ိုင်းရံထားစေမယ်၊ ဒါမှ သာသနာရောင်ဝါလင်းပါတယ်လို့ ပြောနေကြ ဆိုနေကြအသံတွေကို လက်တွေ့နဲ့ ပေါင်းစပ်နိုင်မယ် မဟုတ်လား။
ကိုဝိမုတ္တိသုခရဲ့ ဒီလိုလေးဆိုရင် ကောင်းမလားလို့ဆိုတဲ့ ပို့စ်ကိုဆွေးနွေးရင်း ဒီနေ့ဓမ္မစကူးလ်သွားရင်းပေါ်လာတဲ့ အတွေးလေးတွေကိုချရေးကြည့်တာပါ၊ ဒီလိုလေးတွေဆိုရင် ကောင်းမယ်ထင်ပါရဲ့ပေါ့၊တကယ်တော့လဲ စိတ်ကူးယဉ်ဆိုတာ လက်တွေ့ဘ၀နဲ့တော့ ကွာနေတတ်ပါတယ်၊အေဘရာလင်ကွန်းပြောတဲ့ လုပ်နိုင်ပါတယ်မပြောနဲ့ လုပ်ပြလိုက်ပါဆိုတဲ့ စကားကလဲ နားထဲက မထွက်ပါဘူး၊ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါလေးတွေ ဒီလိုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ကောင်းမယ်ထင်ရဲ့။
ဓမ္မစကူးလ်သင်တန်းပြီးတော့ သီရိလင်္ကာ ကလေးငယ်တွေ စုပေါင်းတန်းစီပြီး ရွတ်ဆိုသွားတာက ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံ တိဋ္ဌတု ပါတဲ့။( မော်ဒန်အလိုအရတော့ တိဋ္ဌတု စိရံ ဗုဒ္ဓသာသနံ ပါ။ )
Posted by yawcommunity at Monday, February 15, 2010 1 comments Links to this post
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ Philippine ကို လေ့လာရေး ခရီးသွားဖြစ်ပါတယ်၊ ကျွန်းငယ်လေးတွေ လေးထောင်ကျော်ရှိပြီး လှပတဲ့ ကမ်းခြေအလှတွေ အေဒီ ၁၅ရာစုက ဆောက်ထားတဲ့ ရှေးဟောင်း ဘုရားကျောင်းတွေ ခံတပ်တွေကလဲ နိုင်ငံခြားသားတွေအဖို့ စိတ်ဝင်စားစရာပါ၊
ဖီလစ်ပိုင်ကို သွားမယ်ဆိုရင် ဗီဇာယူစရာ မလိုပါဘူး၊ Immigration ကိုရောက်မှ Arrival Visa ထုပေးတာပါ၊ နေရာတိုင်းမှာ လွတ်လွတ် လပ်လပ်သွားနိုင်တယ်၊ ကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက် မုန်တိုင်းတော့ မကြာခဏ ၀င်ပါတယ်၊ စာရေးသူတို့ မနီလာကို စရောက်တဲ့နေ့က တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်း ၀င်တာကို တွေ့ခဲ့ရတယ်၊ ဘ၀တစ်သက် မတွေ့ဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံ တစ်ခုပါ၊ တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းက ဆောင်းရာသီမှာကျတဲ့ နှင်းငွေ့တွေလို အရင်ထုတ်လွှတ်ပါတယ်၊ ပြီးတော့ မြွေအော်သံနဲ့တူတဲ့ အသံတွေ မြည်လာပါတယ်၊ တရွှီးရွှီးမြည်နေတဲ့ အသံတွေက တိုင်ဖုန်းအတွေ့အကြုံ မရှိသူတွေကို ကြောက်လန့်စေတာတော့ အမှန်ပါပဲ၊ ပြီးရင် လေတွေ မိုးတွေ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကျလာတော့တာပါ၊
ဒါကြောင့်မို့ ထင်ပါရဲ့ မနီလာမြို့ မြင်ကွင်းကလဲ သန့်ရှင်းမှု အားနည်းလှပါတယ်၊ သစ်ရွက်ခြောက်တွေ ရေအိုင်တွေ မနီလာမြို့ အနှံ့တွေ့နေရပါတယ်၊ မနီလာမြို့ပေါ်မှာ လိုင်းကားကောင်းတွေ မရှိသလောက်ပါပဲ၊ မနီလာက ထုတ်တဲ့ ဂျစ်ကားရှည်ကြီးတွေကို အမြတ်တနိုး လိုင်းကားပြေးဆွဲနေတာ တွေ့ရတယ်၊
မနီလာမြို့ပေါ်မှာ လေ့လာစရာတွေကတော့ အေဒီ ၁၅ရာစုက စပိန်လူမျိုးတွေ ဆောက်ထားခဲ့တဲ့ ရှေးဟောင်း Church ကျောင်းတွေ၊ မနီလာမြို့ မြောက်ပိုင်းက ခံတပ်တွေ၊ မနီလာကမ်းခြေနဲ့ မနီလာမြို့လယ်မှာရှိတဲ့ Museum City Hall စတာတွေဟာ လေ့လာသင့်တဲ့နေရာတွေပါ၊
မနီလာကနေ ၂ နာရီကျော် လေယဉ်စီးရတဲ့ စီဘူး ကမ်းခြေဟာလဲ နိုင်ငံခြားသားတွေ အများဆုံးသွားရောက်တဲ့နေရာပါ၊ မနီလာမြို့ခံတွေရဲ့ အဆိုအရ မနီလာထက် မနီလာပြင်ပက ပိုပြီးသာယာလှပတယ်လို့ ဆိုပါတယ်၊ မိမိတို့သူငယ်ချင်းတစ်စုကတော့ မနီလာမြို့အပြင်ဖက်တွေက မရောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး၊
စာရေးသူရဲ့ တစ်ဦးတည်းအမြင်အရတော့ မနီလာမြို့ပေါ်မှာ လူတွေအလုပ်လက်မဲ့များနေတာ တောင်းရမ်းနေတဲ့ကလေးငယ်များနေတာ စီးပွားရေး နလန်မထူနိုင်လို့ မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေတာတွေ တွေ့မြင်ခဲ့ရသလို ကိုယ့်ကျင့်သိက္ခာရောင်းစားတဲ့ လူတွေလဲ ပေါများတယ်လို့ မြင်ပါတယ်၊
မြို့တွင်းနေရာတွေ ညစ်ပတ်နေတာတွေလဲ နေရာတိုင်းလိုလို တွေ့ခဲ့တယ်၊ ဒါက စာေ၇းသူတို့ သွားသလောက် မြင်သလောက်ကိုသာ ပြောပြနိုင်တာပါ၊ စိတ်ထဲမှာတော့ ရန်ကုန်လောက် သန့်ရှင်းမှု မရှိဘူးလို့ ခံစားခဲ့ရတယ်၊ ဟိုတယ်ခ စားသောက်စရိတ်စတာတွေကတော့ ဈေးကြီးတယ်လို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး၊ တညတာ ဟိုတယ်တည်းခိုစရိတ် ဒေါ်လာ ၄၀ ၊ ထမင်းတနပ် ဖီလစ်ပိုင်ငွေ Peso ၈၅ လောက်ပဲရှိတာမို့ သက်သာတယ်လို့ ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်၊
မြန်မာထက်သာတာတွေကတော့ ရေမှန် မီးမှန် လမ်းကောင်း ဆက်သွယ်ရေးကောင်းတာတွေဟာ မြန်မာထက်သာတာ သေချာပါတယ်၊
ခရစ်ယာန်အများစုရှိတဲ့နေရာမှာ မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းတော်ကြီး နှစ်ခု ရှိနေတာကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ယောက်အတွက် ဂုဏ်ယူစရာပါ၊ ရှစ်ထပ်အဆောက်အဦးကြီး နှစ်ခုနဲ့ ကြီးကျယ်ခန်းနားစွာ တည်ဆောက်ထားတာပါ၊ အဲဒီအဆောက်အဦးရဲ့ အပေါ်မှာ စေတီတော်ကြီးတစ်ဆူတည်ထားပါသေးတယ်. မနီလာမြို့ ဘယ်နားကကြည့်ကြည့် အဲဒီစေတီတော်ကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်၊
မနီလာမှာ ငါးရက်လှည့်ပတ်ပြီး ခရီးတွေဆက်ဖြစ်နေပါတယ်၊
ဆရာတော်ကြီးများရဲ့ အဆိုအရတော့ သုဒ္ဓါဝါသ ငါးဘုံကလွဲလို့ ကျန်တဲ့နေရာ အားလုံးဟာ အရင့်အရင်တွေက ရောက်ဖူးပြီးသားတွေလို့ ဆိုပါတယ်၊ သံသရာကျင်လည်စဉ်ကလို့ ဆိုလိုတာပါ၊ ဘုရားရှင်ကတော့.. ရဟန္တာမဖြစ်သေးသမျှ သံသရာ ခရီးသွား အဆင့်သာရှိသေးကြောင်း ဟောတော်မူပါတယ်၊ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် ဒေသတွင်းခရီး နိုင်ငံရပ်ခြားခရီးမှသည် သံသရာခရီးလျှောက်လှမ်းတဲ့အချိန်မှာ များများလဲချန်ထား များများလဲယူသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားရင် ခရီးဆုံးကို ဆက်လက်ချီတက်နေရမယ် မဟုတ်ပါလား၊ ။
Posted by yawcommunity at Wednesday, November 04, 20090comments Links to this post
ငပလီနဲ့ လန်ကာဝီစာအုပ်ကို ဖတ်ပြီး ကတည်းက လန်ကာဝီကျွန်းကို စိတ်ဝင်စားခဲ့ ရောက်ချင်ခဲ့တာပါ၊ လန်ကာဝီကျွန်းရဲ့ ကြည်နူးစရာ ကမ်းခြေရှုခင်းတွေက ကမ္ဘာကျော်ဖြစ်နေခဲ့တာလဲ တကြောင်းပေါ့၊ အခုတော့ ရောက်ချင်လှတဲ့ ဒီခရီး ရောက်ခွင့်ကြုံခဲ့ပါတယ်၊
လန်ကာဝီကျွန်းဟာ မလေးရှားနိုင်ငံတွင်းမှာရှိပါတယ်၊ ပီနန်ကျွန်းကနေ မော်တော်နဲ့ သုံးနာရီလောက်စီးရတဲ့ နေရာမှာ တည်ရှိတယ်၊ နိုင်ငံခြားသား အများစု လာရောက်လည်ပတ်တဲ့နေရာ တစ်ခုလဲ ဖြစ်ပါတယ်၊ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံခြားသားတွေ စိတ်ဝင်စားအောင် Duty free zone အဖြစ်သတ်မှတ်ထားခြင်းပါပဲ၊
လန်ကာဝီကိုရောက်ရင် နောက်ဆုံးပေါ် ကားကြီး ကားကောင်းတွေကို ငှါးပြိး ကိုယ်တိုင် မောင်းနှင်သွားလာနိုင်ပါတယ်၊ တရက်တာ ခရီးကိုမှ မလေးရှားငွေ ၁၂၀ သာ ပေးရတာပါ၊ ကားမမောင်းတတ်သူ မိမိတို့မှာတော့ ဒရိုင်ဘာကိုပါ ငှါးကြရပါတယ်၊ ဒရိုင်ဘာကြေးက တရက်ကို မလေးငွေ ငါးဆယ်ပါ၊
တည်းခိုစရာ ဟိုတယ် ဘန်ဂလိုတွေကလည်း ဈေးသက်သာတာကိုတွေ့ရတယ်၊ သုံးယောက်အိပ်ခန်း တစ်ခန်းကိုမှ မလေးငွေ ၁၁၀ သာပေးရပါတယ်။မလေးရှားပြည်သူတွေ လန်ကာဝီကို စိတ်ဝင်စားကြပုံကတော့…
လန်ကာဝီကျွန်းရဲ့ ကျွန်းအလှတွေရယ်..ပြိးတော့ Mahsuri လို့ခေါ်တဲ့ ဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန် အဖြစ်အပျက်တွေရယ်ကြောင့် ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားကြတာကို တွေ့ရပါတယ်၊ မဟာစူရီလို့ခေါ်တဲ့ အရမ်းချောမောလှပတဲ့ အမျိုးသမီးတဦး ဟိုးအရင်က ဒီလန်ကာဝီမှာ ရှိခဲ့ဖူးတယ်၊
အချိန်တန် အရွယ်ရောက်တော့ စစ်သူကြီး တစ်ဦးနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့တယ်၊ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ စစ်သူကြီး စစ်ပွဲကို သွားနေချိန်မှာ အိမ်နီးချင်း ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်နဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့တယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ မဟာစူရီနဲ့ ဒီကောင်လေး အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တယ်လို့ စွပ်စွဲပြောဆိုလာခဲ့တယ်၊ မဟာစူရီကတော့ ရိုးသားတဲ့ ခင်မင်မှုဖြစ်လို့ ဒီလိုပဲ ပုံမှန်နေထိုင်ခဲ့တယ်၊
စစ်သူကြီး စစ်ပွဲက ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါ ပတ်ဝန်ကျင်က သူတို့ရဲ့ အမြင်တွေကို စွပ်စွဲပြောကြားတဲ့အခါမှာတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ စစ်သူကြီး မစူးစမ်း မဆင်ခြင်နိုင်တော့ပဲ မဟာစူရီကို သစ်ပင်မှာချည်ပြီး ချွန်ထက်တဲ့ တံကျင်နဲ့ မဟာစူရီကို မသေမချင်း ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်၊
မဟာစူရီ အသက်မထွက်ခင် ကျိန်စာ ဆိုခဲ့တာက.. ဒီလန်ကာဝီကျွန်းဟာ ဆွေခုနစ်ဆက် မျိုးခုနစ်ဆက် မတိုးတက်ပါစေသတည်း လို့ ကြိမ်စာဆိုထားခဲ့တယ်၊
ဒေသခံတွေရဲ့အဆိုအရ.. ၀န်ကြီးချုပ် မဟာသီယာ လက်ထက်ရောက်မှ လန်ကာဝီကျွန်းကို ဖွံ့ဖြိုးရေး ဇုန်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး ပြုပြင်လာခဲ့တာကြောင့် လန်ကာဝီဟာ တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်၊
မဟာသီယာ ၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ်ချိန်ဟာ ဆွေခုနစ်ဆက် မျိုးခုနစ်ဆက်ကို ကျော်လွန်တဲ့ နှစ်လို့ ပြောဆိုတာကို လည်းမှတ်သားနားထောင်ခဲ့ရပါတယ်၊ ဒဏ္ဍာရီဆန်ခြင်း မဆန်ခြင်းထက် ဒေသခံပြည်သူတွေကတော့ တကယ့်ကို အမှန်တရားအဖြစ်လက်ခံထားတယ်၊
မဟာစူရီပြတိုက်ကိုလဲ ကြီးကျယ်ခန်းနားစွာ ဆောက်လုပ်ပြသထားသလို မဟာစူရီ မြှုပ်နှံရာအုတ်ဂူကိုလဲ ဒီနေ့အထိ တွေ့မြင်နိုင်ပါသေးတယ်။
လန်ကာဝီမှာ လေ့လာစရာတွေအဖြစ် ကျွန်းပေါင်းကိုးဆယ်ကျော်..Under Water World မဟာသီပြတိုက် နဲ့ Black Sand Beach တို့ဟာ လေ့လာသင့်တဲ့နေရာတွေပါ။
ထူးထူးခြားခြားလေး သတိထားခဲ့ မိတာကတော့ မြန်မာပြည်က ပသျှူးလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ ရွာငယ်လေးပါ၊ ရေလမ်းခရီးနဲ့ သွားကြ လာကြရင်း လန်ကာဝီမှာ အခြေချ နေထိုင်လာခဲ့တာ ဒီနေ့အချိန်ထိပါပဲ.
မလေးရှားအစိုးရကတော့ အဝေးရောက် မလေးလူမျိုးဆိုတဲ့ လက်မှတ်တွေ ထုတ်ထားပေးတယ်လို့ သိခဲ့ရပါတယ်၊ လန်ကာဝီကျွန်းဟာ ကီလိုမီတာ ၂၀ ပတ်လည်ရှိတာကြောင့် သာယာတဲ့ရှုခင်းတွေ ပင်လယ်ကမ်းခြေတွေ ပေါများလှပါတယ်၊ ပီနန်းကျွန်းကနေ တနေ့ကို ရှပ်ပြေး မော်တော်ယဉ်နှစ်စီးနဲ့ ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်.မနက်ရှစ်နာရီခွဲ တချိန်ပဲ ရှိတယ်၊ အပြန်ခရီးကတော့ ညနေငါးနာရီခွဲမှ မော်တော်ထွက်ပါတယ်၊
လန်ကာဝီကျွန်းအနှံ့သွားဖို့ဆိုရင် တညအိပ်ခရီးလောက်သွားမှ လုံလောက်ပါမယ်၊
မိမိတို့ စရောက်တဲ့နေ့မှာတော့ ဒကာကိုတင်ဝင်းက နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်ပြီး ၇-၁၀-၀၉ မနက်ခင်းမှာတော့ ဒကာကိုကျော်ဝင်းဦးဆောင်တဲ့ လန်ကာဝီရောက် ညီအကိုမောင်နှမများက သံဃာတော်တွေကို အာရုံဆွမ်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းကြတယ်၊ စာရေးသူက တရားစကားပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်၊
သံဃာတော်တွေအရောက်နည်းတဲ့ ဒေသမို့ သံဃာတော်တွေကို ဖူးမြင်ရတော့ အတော့်ကို ကြည်နူးနေကြတယ်၊ သံဃာတော်တွေ ဟောပြောတဲ့ တရားသံကို နာယူခွင့်ရပြန်တော့ သူတို့ရဲ့ မျက်ဝန်းတွေမှာ ကြည်နူးတဲ့ ပုံရိပ်တွေဟာ အထင်သားပေါ်လွင်နေကြတာကို သတိထားခဲ့မိပါတယ်၊
မှန်ပါတယ်၊ ရတနာဆိုတာ ထိုက်သူတို့သာ သုံးစွဲခွင့်ရတာမို့ ရတနာနဲ့ ဆုံတွေ့ခိုက် ရတနာတန်ဖိုးကို သိအောင်ကြိုးစားသင့်တယ်ဆိုတဲ့ အတွေးတွေကို လန်ကာဝီခရီးက ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်၊ ကျေးဇူးပါ လန်ကာဝီ။ ။
Posted by yawcommunity at Saturday, October 10, 2009 1 comments Links to this post
ကောတ(Kota) ရာဇမဟာဝိဟာရသို့ လေ့လာရေးခရီး
ကိုလံဘိုကနေ ရှစ်ကီလိုမီတာလောက် ဝေးတဲ့ ရွာလေးတရွာကို ညပိုင်း ၇ နာရီခွဲ လောက်မှာ သူငယ်ချင်းများနဲ့အတူ လေ့လာရေးခရီး သွားဖြစ်တယ်၊ ချစ်စရာယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတမ်း စဉ်လာတွေကို အမြတ်တနိုး ထိန်းသိမ်းလေ့ရှိတဲ့ သီရိလင်္ကာ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ဓာတ်တော် စွယ်တော်လှည့်ပွဲကို သွားရောက် ဖူးမြော်ကြတာပါ၊ သူတို့ကြွေးကြော်သံက Buddhism From Generation to Generation ပါ၊
မျိုးဆက်သစ်တွေကို မွန်မြတ်တဲ့ ဘာသာရေး အမွေပေးဖို့ အဓိကရည်ရွယ်ပြီး ယဉ်ကျေးမှုတွေ ထိန်းသိမ်းနေတာကို လေ့လာသိရှိရတယ်. စိတ်ထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ဘာသာရေးဖက်မှာ ဒီလို စနစ်တကျလေး ထိန်းသိမ်းနိုင်ရင် ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးနေမိတယ်၊
တကယ်တော့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ စွယ်တော်အစစ်က ကန္ဒီမြို့မှာ ရှိတာပါ၊ တချိန်က ကောတရာဇ မဟာဝိဟာရမှာ ဘုရားရှင်ရဲ့ စွယ်တော်အစစ် သီတင်းသုံးဖူးတယ်လို့ သမိုင်းတွေက ဆိုပါတယ်၊ အခု စွယ်တော် ဓာတ်တော်လှည့်ပွဲကလည်း ကန္ဒီမြို့ စွယ်တော်လှည့်ပွဲလိုပဲ ဆင်တွေအမြောက်အများ လူတွေအမြောက်အများ အသုံးပြုပြီး လှည့်လည်ပူဇော်ကြပါတယ်၊
ခေတ်မှီ လျှပ်စစ်တွေ ထိန်ထိန်ညီးအောင် ရနေပေမယ့် ဒီလှည့်လည်ပူဇော်ခံပွဲမှာ သူတို့သုံးနေတာက ဟိုး-ရှေးခေတ် ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့.. အုန်းသီးအခွံခြောက်ကို ဓာတ်ဆီလောင်းပြီး သံခြင်းထဲမှာ ထည့်ပြီး ထွန်းညှိပူဇော်ပါတယ်၊ ဘုရား ရဟန္တာတွေရဲ့ ဓာတ်တော်တွေ စွယ်တော်ပွားတွေကိုတော့ ဆင်ပေါ်မှာတင်ပြီး လှည့်လည်ပါတယ်၊ အဲဒီ ဆင်တွေရဲ့နောက်မှာမှ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အကအဖွဲ့တွေက လမ်းလျှောက်ရင်း ကပြဖျော်ဖြေကြတယ်၊
အဲဒီနောက်ကမှ ရှင်ဘုရင်ကြီးပုံစံ မှူးမတ်တွေခြံရံကာ လိုက်ပါလာကြပါတယ်၊ လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးတဲ့ သီရိလင်္ကာ ဒကာတစ်ယောက်ကို မေးကြည့်တော့.. ရှင်ဘုရင်တော့ မဟုတ်ပါဘူး.. ရွာသူကြီးက ဓာတ်တော်တွေ စွယ်တော်ပွားတွေကို ပူဇော်ပြီး ရွာသူ ရွာသားတွေကိုလဲ ပူဇော်စေတဲ့ ပုံကို သရုပ်ဖော်တာလို့ ပြောပြပါတယ်၊ လှည့်လည်ပူဇော် ကပြဖျော်ဖြေရေး အဖွဲ့တွေကလည်း တကယ့်ကို များလှပါတယ်.. ဟန်နုမာ မျောက်မင်းအက၊ ပန်ချာပီအက၊ သီရိလင်္ကာ ခေတ်အဆက်ဆက် ရိုးရာအက၊ ဟိန္ဒူအက၊ ဆင်ဟာလိလူမျိုးတွေရဲ့ တတ်အပ်တဲ့ အတတ်ပညာအက စသည်ဖြင့် စုံလင်လှတယ်. လမ်းဘေးဝဲယာ တစ်လျှောက် ကြည့်ရှုနေတဲ့ ပရိသတ်ကလည်း တိုးမပေါက်အောင်ကို စည်ကားလှတယ်၊ ကန္ဒီစွယ်တော် လှည့်ပွဲကိုတော့ ကမ္ဘာက Incredible ceremony လို့ တင်စားပြောဆိုကြပါတယ်..
ယခု ကောတရာဇ မဟာဝိဟာရ -က ဓာတ်တွေစွယ်တော် လှည့်ပွဲကိုလဲ ဒုတိယ Incredible ceremony လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်၊ သူ့ဓလေ့ သူထုံးစံ သူ့ရိုးရာကို အစဉ်အလာမပျက် ထိန်းသိမ်းနိုင်တာဟာလည်း ဂုဏ်ယူစရာ တစ်ခုလို့ မြင်ပါတယ်၊ ယဉ်ကျေးမှု စာပေ ဂီတဟာ လူမျိုး တစ်မျိုးရဲ့ တန်ဖိုးကို တိုင်းတာနိုင်တယ်လို့ဆိုရင် ကောတရာဇ မဟာဝိဟာရ-က ဓာတ်တော်စွယ်တော်လှည့်ပွဲ သို့မဟုတ် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ဖော်ထုတ်ပွဲဟာလည်း တကယ့်ကို တန်ဖိုးကို ဖော်ပြနိုင်တဲ့ ပွဲလို့ ဆိုရမှာပါ၊
လူများတွေရဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု မြတ်နိုးထိန်းသိမ်းတာကို တွေ့ရတော့ စိတ်ထဲမှာ အတွေးတွေ နယ်ချဲ့တွေးနေတုန်း..
ဟေး-ပြန်ကြစို့ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ အသံကိုကြားလို့ နာရီကြည့်လိုက်တော့ ည ၁၂ နာရီတောင် ထိုးခါနီးနေပါပြီ၊ အတွေးကို ခဏရပ်ပြီး နေရာကျောင်းကို ပြန်လှည့်အလာမှာတော့ ကောတရာဇ မဟာဝိဟာရ လေ့လာခရီးက ပြောနေတဲ့ Buddhism From Generation to Generation ဆိုတဲ့ အသံက ပဲ့တင်ထပ် ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။ ။
Posted by yawcommunity at Sunday, August 30, 20090comments Links to this post
ပီနန်းဟေးလ်ပေါ်မှ တွေ့မြင်ရသည့်ရှုခင်းနဲ့ ပီနန်းပြတိုက်
ပီနန်းကျွန်းကို ဗြိတိသျှလူမျိုး Francis Light က ၁၇၈၆ ခုနှစ်မှာ တွေ့ရှိပြီး စတင်နေထိုင်ခဲ့လို့သိရပါတယ်၊ ပီနန်းမြို့ဟာ တကယ့်ကို သာယာလှပပြီး စင်္ကာပူမြို့ပြနဲ့ ဆင်တူလှပါတယ်.လွယ်ကူချောမွေ့တဲ့ ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှု သဘာဝရှုခင်းများ သပ်ရပ်စွာ ပြင်ဆင်ထားမှုတွေက ဒုတိယစင်္ကာပူလေးလို့ ပြောရမလိုပါ။
နာမည်ကျော် Penang Hill ပေါ်ကနေ မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းတွေဟာ ပီနန်းမြို့ရဲ့တိုးတက်မှုကို သရုပ်ဖော်ပြနေသလို တကယ့်လှပတဲ့ရှုခင်းတွေလဲဖြစ်ပါတယ်၊ ပီနန်းဟေးလ်နဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာရှိတဲ့ ကွန်ယင်မယ်တော်ကျောင်းဟာလဲ ပီနန်းကျွန်းကို ရောက်သူတိုင်း မဖြစ်မနေ သွားလေ့ရှိပါတယ်. ပီနန်းကျွန်းကနေ တနေ့တာခရီးသွားရတဲ့ လင်္ကာဝီကျွန်းဟာ မြန်မာပရိသတ်များနဲ့ မစိမ်းလှပါဘူး၊ နာမည်ကြီးမြန်မာစာရေးဆရာမတစ်ဦးရဲ့ ငပလီနဲ့ လင်္ကာဝီ စာအုပ်ကြောင့် ပိုလို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပါတယ်.ပြီးတော့ ပီနန်းကျွန်းရဲ့ ပင်လယ်ကမ်းခြေကလဲ တကယ့်ကို သာယာလှပါတယ်။ ပီနန်းကျွန်းရဲ့ သမိုင်းဝင်ပြတိုက်ထဲမှာတော့ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ကစ ပီနန်းကျွန်းပေါ်ကို အခြေချခဲ့ကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ထားတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ပိုလို့ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတာက သွားရေးလာရေး မလွယ်ကူတဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းနှစ်ရာကျော်ကစ ပီနန်းကျွန်းပေါ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာ ဘုန်းကြီးကျောင်း တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းပါပဲ၊ ဆရာတော်ကြီးများ အဆက်ဆက် ထိန်းသိမ်းလာခဲ့တဲ့ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဟာ ယခုဆိုရင် မြန်မာမှုလက်ရာများနဲ့ တကယ့်ကို ပနံ့တင့်လှပါတယ်. ကျောင်းဝင်းထဲမှာလည်း နိုင်ငံခြားသားတွေ လေ့လာစရာအဖြစ် ဗုဒ္ဓ၀င်ရုပ်ကြွ လွမ်းစေတီ ကျောက်တိုင် ဆန်းဒေးလ်စကူးလ် ရှင်ဥပဂုတ်သီတင်းသုံးရာနေရာ ကမ္ဘာလုံး စတဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် သပ်ယပ်သပ်ရှင်းစွာ ပြင်ဆင်ထားတာမို့ ပီနန်းကျွန်းလာတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေဟာ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းကို လာရောက်လေ့လာကြပါတယ်။
ယခုလက်ရှိ ပီနန်းမြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်းကို မြန်မာမှုလက်ရာများနဲ့တိုးတက်အောင် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာကို ကမ္ဘာကသိအောင် စွမ်းဆောင်နေတဲ့ ပီနန်းဆရာတော်ကြီး အရှင်ပညာဝံသကလည်း တကယ့်မြန်မာ့သာသနာ့အာဇာနည်အရှင်မြတ်တစ်ပါးပါ။ ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် ပီနန်းရှိ တရုတ် လူမျိုးများဟာ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာကို စနစ်တကျ ကိုးကွယ်လာတတ်ခဲ့တာပါ. ညီညာစွာဆွမ်းကပ် တရားထိုင် တရားနာ ဘုရားရှိခိုးပုံတွေက ဆရာတော်ကြီး အရှင်ပညာဝံသရဲ့ သာသနာပြုစွမ်းရည်ကို ဖော်ပြနေပါတယ်။ တကယ်လို့များ အကြောင်းဆုံလို့ ပီနန်းကျွန်းကို သွားခဲ့မယ်ဆိုရင် မြန်မာမှုလက်ရာတွေနဲ့ ပနံ့တင့်လှတဲ့ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းရယ် သမိုင်းဝင်လေ့လာစရာနေရာလေးတွေကို ရယ် ရောက်အောင်သွားခဲ့ပါလို့သာ ခွန်းဆင့်ခြွေချင်ပါတယ်။ ။
Posted by yawcommunity at Saturday, July 11, 20090comments Links to this post
၁၅.၀၈.၂၀၀၈ သောကြာနေ့ ညနေပိုင်းမှာ သူငယ်ချင်း (၁၁)ပါးစုပြီး ကန္ဒီကိုသွားကြတယ်၊ ကန္ဒီဆိုတာ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယမြို့တော်, မြတ်စွာဘုရားရဲ့စွယ်တော်အစစ်ကိန်းဝပ်ရာ , ဗိုလ်ချုပ်အောင်းဆန်းတို့ ကန္ဒီစာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့နေရာ, ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးသန့် ,၀န်ကြီးချုပ် ဦးနု နဲ့ ဦးနေ၀င်းတို့အမှတ်တရ စိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့ သစ်ပင်များရှိတဲ့မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်၊ ကိုလံဘိုက နေ (၁၁၉) ကီလိုမီတာ အကွာမှာ တည်ရှိတယ်၊ လမ်းတွေက သာယာသလို ရာသီဥတုကလည်း သာယာတယ်၊ အခုအချိန်ထိ အအေးဓါတ်တွေပြန့်လွင့်နေဆဲပါ၊
ကန္ဒီမြို့ကိုရောက်ခါနီး ကားလမ်းတွေက မေမြို့က ခြောက်ထပ်ကွေ့ လမ်းတွေလို့ပါပဲ ၊ သဲထိတ်ရင်ဖိုနဲ့ ကြည်နူးစရာလည်း ကောင်းပါတယ် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က “မေမြို့ခြောက်ထပ်ကွေလေးကို သတိရလိုက်တာကွာ” လို့ဆိုနေပါသေးတယ်၊
ကန္ဒီဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဘာသာရေး, နိုင်းငံရေး, သမိုင်းကြောင်းတွေ ဆက်စပ်တဲ့ ချစ်စဖွယ်ကောင်းတဲ့မြို့လေး တစ်မြို့ပါ၊ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က “ နေရာတိုင်းမှာ ကဗျာလေးတွေရှိနေတယ်” ဆိုပြီးသူ့ခံစားချက်ကိုပြောပြနေပါသေးတယ်၊ ဘယ်ခံစားချက်မဆို အဲဒီခံစားချက်ရဲ့နောက်မှာ အနုပညာမြောက်တဲ့ကဗျာတွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်၊
မမေ့နိုင်စရာ တစ်ခုနဲ့လည်း ကြုံခဲ့ရသေးတယ် ကန္ဒီရောက်ခါနီး (၁၅)ကီလိုမီတာလောက်မှာ စီးလာတဲ့ကားက ပျက်သွားလို့ ၀ိုင်းပြီးတွန်းပေးရသေးတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကားကဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရတာနဲ့ ကားဝပ်ရှော့မှာ အပ်လိုက်ရတယ်၊
ကားလမ်းနံဘေးဟိုရပ် ဒီရပ်နဲ့ (၄၅)မီနစ်လောက်ကြာသွားတယ်၊ ဒါကိုမြင်သွားတဲ့ ကုလား ဒကာတစ်ယောက်က သူကားနဲ့ကန္ဒီအရောက်လိုက်ပို့ပေးတယ် (တကယ့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် သူသာလိုက်မပို့ရင်စွယ်တော်လှည့်ပွဲ့နဲ့လွဲရတော့မှာလေ)
ကွက်တိပါပဲ မြန်မာကျောင်းကိုရောက်တော့ ည(၈)နာရီထိုးခါ် နီးနေပါပြီ ကိုယ်လက်သန့်စင်ပြီး စွယ်တော်တိုက်ကိုသွားရတော့တာပါ လက်ရှိစွယ်တော်တိုက်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ ကန္ဒီစာချုပ် ချုပ်ဆိုတဲ့ အဆောက်အဦးရဲ့ဘေးနားမှာပါ၊
မြတ်စွာဘုရားရဲ့စွယ်တော်အစစ် တင်ထားတဲ့ဆင် အဲဒီဆင်ကိုဘေးက ဆင်နှစ်ကောင်က ရံထားပါတယ်၊ အဲဒီဆင်သုံးကောင် မထွက် ခင်- အခြား အခြားသော ဆင်တွေပေါ်မှာ စွယ်တော်ပွား နဲ့ ပိဋကတ်သုံးပုံတွေ တင်ထားတယ၊် အဲဒီဆင်တွေရဲ့ နောက်က ရှင်ဘုရင်ပုံစံ ၀တ်စားထားသူ -ပြီးတော့ အခြွေအရံတွေ, သီဟိုဠ်ခေတ်အလိုက် ၀တ်စားဆင်ယင်မှုတွေ, ယဉ် ကျေးမှု သရုပ်ဖော်အကတွေ, အဲဒီဘေးမှာ မီးတုတ်ကိုင်ပြီး ၀ိုင်းရံထားတဲ့ သူတွေက ဖိနပ်မစီးဘဲ တန်းစီလျှောက်လာကြတယ် ၊
အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှာ ဆင်သုံးကောင် (သို့) နှစ်ကောင် စွယ်တော်ပွား ပိဋကတ်သုံးပုံ တစ်စုံ ရှင်ဘုရင်တစ်ပါး ရှင်ဘုရင်ရဲ့အခြွေအရံများ ဗုဒ္ဓ၀င်ဇာတ်တော်လာ သရုပ်ဖော်ပြကွက် ယဉ်ကျေးမှု့သရုပ်ဖော်ပြကွက်တွေ ကိုသရုပ်ဖော်တဲ့ အကများစွာပါဝင်ပါတယ်၊
ည(၈)နာရီလောက်ကစပြီး လှည့်တာ ည(၁)နာရီ လောက်မှပြီးတယ၊် ဆင်ပေါင်း (၇၀)ကျော် လူပေါင်း(၁၀၀၀၀)ခန့်သုံးရတာပါ၊ ကန္ဒီစွယ်တော်လှည့်ပွဲက သူတို့ရဲ့ ဘာသာတရား အပေါ် ယုံကြည်ချက် ဘယ်လောက်ရှိတယ်-ဆိုတာပြသနိုင်သလို့ ခေတ်တွေဘယ်လို ပြောင်းပြောင်း သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကို မြတ်မြတ်နိုးနိုးရှိတယ် ဆိုတာကိုလည်းဖော်ကျူးနိုင်ပါတယ် (ပြည်ပရောက်မြန်မာမလေးတွေလုံချည်ဝတ်ရတာ ရှက်စရာ ကောင်းတယ် ၊ ခေတ်မမှီဘူးဆိုတဲ့ စကားနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပါပဲ)၊
မိမိတို့လည်း တည်းခိုတဲ့နေရာ ပြန်ရောက်တော့ ည(၁၂)နာရီခွဲ ကျော်နေပါပြီ ၊ ဒါပေမဲ့ ဘာသာ သာသနာ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ နိုင်ငံရဲ့အရေးဟာ အဲဒီနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသား တစ်ယောက်စီအတွက် ဘယ်လောက်အရေးပါတယ်, ဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားရမယ် ဆိုတဲ့ အတွေးတွေ ရင်ထဲမှာ ကျယ်လောင်စွာမြည်ဟီးနေလို့ အဲဒီည ကောင်းကောင်း အိပ်မပျော်ခဲ့ပါဘူး၊ အအေးဓါတ်နှင့် အတူ ယဉ်ကျေးမှုတွေ ပြန့်လွင့်နေတဲ့ ကန္ဒီ ည တစ်ညကိုတော့ မေ့ပျောက်လို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူးလေ။
Posted by yawcommunity at Sunday, August 17, 20080comments Links to this post